ရုရှားနိုင်ငံမှ ဦးစီးကျင်းပသော အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ပါဝင်မည်မဟုတ် - Xinhua News Agency
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ မြို့တော် ကဘူးလ်တွင် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားရာနေရာ၌ အာဖဂန် တာလီဘန်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအား အောက်တိုဘာ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ အနေဖြင့် ယခုသီတင်းပတ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံက ဦးစီးကျင်းပသည့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများ၌ ပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ မော်စကိုဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Troika-plus က ထိရောက်မှုရှိပြီး အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာ ပါဝင်ဖို့နဲ့ ဖိုရမ်ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီရက်သတ္တပတ်မှာတော့ ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ထောက်ပံ့သယ်ပို့ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကြောင့် ဆွေးနွေးပွဲမတက်ရောက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် လုပ်ငန်းစဉ်အား ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Price က ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုင်ရာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အထူးကိုယ်စားလှယ် Zalmay Khalilzad က ရာထူးမှနုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီး ၎င်း၏လက်ထောက် Thomas West က ၎င်း၏နေရာတွင် အစားထိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အန်တိုနီ ဘလင်ကင် (Antony Blinken) က ယင်းနေ့ညနေပိုင်းတွင်ပင် ကြေညာခဲ့သည်။
သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့် လက်ရှိသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်တို့ လက်အောက်တွင် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော Khalilzad ၏ နုတ်ထွက်မှုသည် ယင်းနိုင်ငံမှ အမေရိကန် တပ်များ ရုပ်သိမ်းပြီးနောက် နှစ်လပင်မကြာသည့်အချိန်၌ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံက အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ပဋိပက္ခအလွန် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအပေါ် အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်မည့် အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံအား ဖိတ်ကြားခဲ့ကြောင်း အာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာ ရုရှားအထူးသံတမန် Zamir Kabulov က အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်တွင် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသော အစည်းအဝေးသို့ တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်များကိုလည်း ဖိတ်ကြားထားကြောင်း၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မော်စကို-ပုံစံ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ရုရှား၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ တရုတ်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီရန်နှင့် အိန္ဒိယ စသည့်နိုင်ငံများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအကြား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများအတွက် ခြောက်နိုင်ငံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အခြေခံထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-19 06:57:42|Editor: huaxia
WASHINGTON, Oct. 18 (Xinhua) — The United States will not join talks on Afghanistan hosted by Russia this week, the Department of State said on Monday.
“We will not participate in the Moscow talks,” State Department spokesperson Ned Price told reporters inapress briefing. “The Troika-plus has been an effective,aconstructive forum. We look forward to engaging in that forum going forward, but we’re not inaposition to take part this week.”
Russia has invited Taliban representatives to the meeting slated for Oct. 20. The Moscow-format consultations on Afghanistan were launched in 2017 on the basis of the six-party mechanism for consultations among representatives from Russia, Afghanistan, China, Pakistan, Iran and India. Enditem
Photo : An Afghan Taliban member stands guard at the site ofablast in Kabul, capital of Afghanistan, Oct. 3, 2021. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua)